Posted by တန်ခူး at 4:23 PM
ကြီးမားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ သံယောဇဉ်တချို့ကို ခံစားလိုက်ရတယ်။
ချစ်တဲ့ တန်ခူးနဲ့ တန်ခူးချစ်သော မောင်နဲ့ အတူတကွ လှပတဲ့ မိသားစုဘဝလေး နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ခိုင်မာပါစေ...။
မောင့်ကို ပြောလိုက်ပါ... Happy Birthday လို့...း))
စာတိုတိုလေပေမယ့် နှလုံးသားနဲ့ ရေးတာကြောင့် တကယ့်ကို သိင်္ဂါရ ရသမြောက်တယ် အမတန်ခူးရေ ...။
အမရဲ့ ချစ်ခင်ပွန်း=ချစ်သူငယ်ချင်း = ချစ်လေးလေး = ချစ်သောမောင်ရဲ့ မွေးနေ့မှသည် နေ့ရက်တိုင်း မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေလို့ ...
နှလုံးသား နဲ့ ရေးတဲ့စာကို
နှလုံးသား နဲ့.. ကြည်ကြည်နူးနူး ဖတ်သွားပါတယ်
Happy Birthday အစ်ကိုကြီးရေ
ချစ်စရာကဗျာလေးနဲ့ သိပ်ကြည်နူးနေမယ်ထင်ပါ့း)
နှလုံးသားနဲ့ရေးဖွဲ့မှုလေးကို ဖတ်သွားပါတယ် လေနုအေးရေ..
Happy Birthday to your love one :)
ကျွန်မရဲ့မောင်က ဖတ်ပြီး ပြုံးပြုံးကြီး လုပ်နေမှာ မြင်ယောင်သေး။
Happy Birthday my friend, ATN. မောင့်ကျွန်မနဲ့ သားသားလေးနဲ့တူတူ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ချိုသင်းတို့ ညီအမရဲ့ ချစ်သူ ခင်ပွန်းတွေ ဒီနေ့မှာ မွေးကြတာ မမနဲ့ ပိုချစ်ခင်ဖို့ အကြောင်းတွေ ဖြစ်လာတာပဲပေါ့နော်။
Happy Birthday ပါ မမချစ်တဲ့ အကိုရေ..
အခါခါဖတ်.... မရိုးနိုင်တဲ့ စာသားလေး...